« Efa zatra mampikatso » -
AccueilTresaka« Efa zatra mampikatso »
09/06/2018 admintriatra Tresaka 0
Izay miara-dia amin’ireto depioten’ny 13 mey ireto, dia nahita faisana avokoa. Mikatso na tsy mahomby. Vao nidiran’ireto depioten’ny 13 mey ireto fotsiny ny ny resaka fananganana governemanta dia efa nikatso tanteraka. Sahirana ilay Praiminisitra vaovao amin’izao fotoana eo anatrehan’ny ady saritaka tsy manam-piafarana nentin’ireto depioten’ny 13 mey ireto.
Tsy mahagaga moa izany satria efa manam-pahaizana manokana amin’izany fampikatsoana izany izy ireo. Noventiventesina teny an-kianja tamin’ny fomba ofisialy fa vonona hampikatso ny fiainam-pirenena raha sanatria ka tsy tafiditra anaty governemanta ny sasany amin’izy ireo. Efa nanome andran-tsira mihitsy aza tamin’ireny fikasana fampikatsoana ny fampianarana sasantsasany sy ny fampikatsoana asan’olona samihafa. Soa ihany moa fa mahay lavitra noho izy ireo ny tompon’andraikitra isan’ambaratonga, ka tsy tafaroboka tamin’izany fampikatsoana kasain’ny sasany hatao izany ny firenena.
Efa mba nihiratra kely ny masoandron’ny fizorana any amin’ny filaminana sy ny fiatrehana ny fifidianana, kanefa vao tonga fotsiny ireto depioten’ny 13 mey ireto, dia efa rava ny « tsena » hoy ny fitenenana. Dia sahy mieboebo amin’izany asa fampikatsoana izany mihitsy anie ny sasany amin’izy ireo. Tsy fantany fa henatr’olona no vokatr’izany. Mba olom-boafidy manana ny hasiny ihany kanefa dia zava-dratsy no mampalaza azy: « fampikatsoana ».
Tsy antenaina hitondra fampandrosoana any amin’ny distrika nahalany azy intsony ny depiote toa izany, satria tsy notezaina tamin’ny fampandrosoana fa tamina zavatra hafa.
Tokony ho depioten’ny fampikatsoana no anarana vaovao entin’izy ireo ankehitriny fa tsy izany fanovana izany. Tena mahazendana mihitsy. Hizara seza ho azy aza izy, mbola mahavita mifampikatso. Loza ! Tena mitombina mihitsy ny hoe depioten’ny fampikatsoana fa tsy depioten’ny fanovana.